Car Polishers, Polgbọ ala polishing igwe, Dual Action polishers - Checheng
Mmiri Canton Fair 2017
Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.bụ ọkachamara emeputa nke ụgbọ ala polishers na ụgbọ ala na-elekọta ngwaahịa, tụnyere mmepe na mmepụta, ahịa, na ahia ọnụ. Companylọ ọrụ anyị nwere nhazi ọkachamara, nyocha, na mmepe, n'ichepụta, na otu ndị na-ere ahịa nke na-eme ka anyị nwee ike inye ndị ahịa anyị ọrụ ọkachamara na nke mbụ.
Ọkachamara 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25
Hot ere 15mm Dual Action Polisher 900W Car Polkọwa polishing Machine X15
3inch 12mm Orbital Sander Obere agbanwe Speed ​​Dual Action Car echekwa Polisher DF12A
5inch Car Polisher Polishing Machine 8mm Auto Wax echekwa DF8A
Kacha ọhụrụ 5inch Electric Rotary Car echekwa polishing Machine CHE-C6866
Electric 900W 6-ọkwa ọkwa Grakpọ oku Speed ​​Rotary Polisher maka Car ilingkọwapụta CHE-C5855
Nke na otu onye bụ nri polishing igwe gị? N'oge a, e nwere ọtụtụ ụdị ngwa ọrụ polishing n'ahịa, mana ha nwere ike kewaa ụzọ atọ, nke bụ polisher rotary, polisher na-eme ihe abụọ, na ntanye mmanye na polisher. A rotary polisher bụ a polishing igwe t ...
Gịnị bụ ihe dị iche na abụọ edinam polisher na rotary polisher? A bịa n ’ịhọrọ igwe na-ehicha igwe, otu n’ime ajụjụ ndị ahịa anyị na-ajụkarị bụ:“ Gịnị bụ ihe dị iche n ’ime polis na-arụ ọrụ abụọ na onye na-akpụcha ya?” Ọ bụ ezigbo ajụjụ na maka ...
Really maara n'ezie ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala
1.What bụ ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala abụọ? Ejiri ihe eji eme ihe eji eme ihe site na mmeghari isi. Ọ na-atụgharị n'elu spindle dị n'etiti, spindle a na-agbagharị gburugburu eccentric offset. Ezigbo ihe atụ maka ihe eji eme ihe eji eme ihe bụ gburugburu ụwa. Ala n'onwe ya na-atụgharị ma na ọ ...
Companylọ Ọrụ Companylọ Ọrụ Ọhụrụ
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịgwa gị na adreesị ụlọ ọrụ ọhụụ anyị amalitela na Oct.2018. Enwere ụlọ nlele mara mma iji gosipụta igwe polishing anyị niile na ngwaahịa nlekọta ụgbọ ala, ime ụlọ tii / kọfị maka ndị ọrụ izu ike n'oge ezumike ha, yana ọfịs anọ maka ngalaba dị iche iche. ...
2020 weebụsaịtị ọhụrụ
Emebela weebụsaịtị nke ohuru 2020 anyi. Mmadụ Bịa pịa ma gaa na saịtị ọhụrụ a ịmatakwu banyere ngwaahịa anyị. http://www.chechengtools.com/
Ndị na-eme Polish abụọ, Ndị na-eme ụgbọ ala eji arụ ọrụ abụọ, China Dual Action Car Polisher, Dgbọ oloko ihe eji eme ihe, Ndị Polishers na-eme ihe abụọ, Dual Action Random Orbital Polisher,